Brazil Nagamay Fiicnayn, Garsooraha Ayaa Wax Qashin Ah Qabtay Oo Diiday In Uu VAR Adeegsadaan- Lionel Messi Oo Garsoorkii Copa America Ku Fur Tuuray. - Gool24.Net
Brazil Nagamay Fiicnayn, Garsooraha Ayaa Wax Qashin Ah Qabtay Oo Diiday In Uu VAR Adeegsadaan- Lionel Messi Oo Garsoorkii Copa America Ku Fur Tuuray.
Kabtanka kooxda xulka qaranka Brazil ee Lionel Messi ayaa cadho wayn ka muujiyay garsoorihii dhex dhexaadinayay kulankii Brazil kaas oo uu ku eedeeyay in uu xulkiisa Argentina ka eexday.
Lionel Messi ayaa ka fogaa nin faraxsan markii ay soo dhamaatay ciyaartii Brazil iyo Argentina ee afar dhamaadkii Copa America wuxuuna ku dooday in garsoorihii kulankan hayay iyo waliba garsoorihii maamulayay muuqaal caawiyaha garsoorku in ayna cadaalad samayn.
Garsoore Roddy Zambrano ayaa ahaa garsooraha uu Lionel Messi eedayn ugu soo jeediyay in uu xulkiisa Argentina rekoodhe ka beeniyay kaas oo uu filayay in Sergio Aguero lagu abaal marin lahaa.
Sergio Aguero ayaa qalad lagu galay waxyar ka hor intii aanu Roberto Firmino dhalin goolka labaad waxayna Messi iyo colkiisu dareensan yihiin in haddii ay cadalaad u heli lahaayeen rekoodhihii ay la doonayeen Aguero in ay ciyaarta barbaro ka dhigi kareen.
ugu horayn Lionel Messi oo kulankii Brazil ka hadlaya ayaa yidhi: “Iyagu nagamayn fiicnayn anaga, xili hore ayay shabqa heleen isla markaana goolka labaad waxa uu ka yimid iyada oo aan Aguero rekoodhe lagu abaal marin”.
Messi oo eedayn u soo jeedinaya garsoorkii kulankan ayaa yidhi: “Iyagu (garsoorku) waxay qabteen waxyaabo badan oo qashin ah, laakiin xataa muuqaal caawiyaha garsoorka VAR kamay hubin (rekoodhaha Aguero), taasi waa wax aan la rumaysan karin”.
“Taasi ciyaarta oo dhan ayay ka dhacday, eegmada taabashadii ugu horyasay, waxay u xukumeen asxaan u samaynta (Brazil), noocyadan qashinka ah ayaa anaga naga qasay ciyaarta” ayuu Messi oo cadhaysani hadalkiisa raaciyay.
Messi oo hadalkiisa cadhada ah sii wata ayaa yidhi: “Tartanka oo dhan waxay qabanayeen gacmo qashin ah, rekoodhayaal qashin ah, qaladaad qashin ah, laakiin si ay noqotayba maanta, waxay iska diideen in ay isticmaalaan VAR”.
Laakiin Messi ayaa sheegay in hadalkiisani aanu cudur daar u ahayn guuldarada ay la kulmeen wuxuuna sheegay in ay qiimayn doonaan wuxuuna yidhi: “Wax cudur daar ahi nooma jiro, laakiin waxaanu u baahanahay in aanu dib u egno kan, qiimayno isla markaana aanu rajayno in CONMEBOL (xidhiidhka South America) in ay wax ka qabtaan, laakiin hubaashii ma aha, sababtoo ah Brazil ayaa awood badan ku leh xidhiidhka kubbada cagta South America”.
Lionel Messi ayaa hadalkiisa ku soo xidhay: “Waxaan filayaa in aanu kulan fiican ciyaarnay, waxaanu samaynay dadaal wayn, isla markaana nagamay sarayn iyagu”.